संसदमा गर्जिए गगन : बहुमत हुंदा पनि सरकार दुई तिहाइको पछि लाग्नुको नियत के हो ?-Nagarikaawaj.com
संसदमा गर्जिए गगन : बहुमत हुंदा पनि सरकार दुई तिहाइको पछि लाग्नुको नियत के हो ?
अाेलीसंग मागे गगनले हिसाब किताब
नागरिक आवाज/फागुन २७ ,काठमाडौं।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा आईतबार संसद बैठकमा निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
उनले नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने बताए , सरकार २ तिहाइको पछि लाग्नुको नियत के हो ? मुलुकमा संस्थाहरु हुँदा हुँदै व्यक्ति बलियो बनाउनुपर्छ भनेको के हो भन्दै थापाले सरकार तथा प्रधानमन्त्री माथि प्रश्नै प्रश्नका चाङ खडा गरेका छन् ।
संविधानसभामा नस्विकार्ने एमाले आज संविधान संसोधन गर्न माथापच्चि गरेर सहमतिमा पुग्दै छ भन्ने चर्चा भएको छ । स्पष्ट वहुमतमा रहेको सरकार दुई तिहाईको समर्थन पुर्‍याउने लोभमा हिजो राष्ट्रघात देखेको संविधान संसोधन गर्ने ठाउँमा आएको छ।
आखिर के का लागि दुई तिहाईका दिव्यशक्तिको मोहको पछाडीको कारण के हो ? यसको पछाडीको नियत के हो ?
संविधान संसोधनको विषय अघिल्लो संविधानसभामा राख्दै गर्दा यसको बारेमा उच्चारण गर्नु नै राष्ट्रघात हुन्छ भन्नेहरु कसरि अहिले संविधान संसोधनको मुद्धामा सहमत भएर आए थापाले प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीप्रति प्रश्न तेर्स्याए।
संसदमा पहिलो पटक आफ्नो सम्वोधनका क्रममा नेता थापाले वपीलाई सम्झेर आफ्नो कुरा शुरु गरेका थिए। विपी कोइरालाले २००५ सालमा नेपाली काँग्रेसको ध्येयको बारेमा लेखेको एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्दै थापाले भने नेपाली काँग्रेस जनताको प्रतिनिधीको संस्था बनाउन चाहन्छ। त्यस्तो संस्थाबाट सरकार बनाउन चाहन्छ र त्यो सरकार जनताको प्रतिनिधीको संस्थाप्रति उत्तरदायी होस।
विपीले भने जस्तै जनताको प्रतिनिधीको संस्था संसद त बन्यो तर त्यसलाई राजाले खाइदिए। दोस्रो पटक पनि राजाले खाइदिए। लामो संघर्षपछि राजसंस्था नै फालिएर नयाँ संविधान जारी हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको थापाले स्मरण गराए।